Ngingaba ubuyele into ngaphandle kokuthola uzothatha imali yakho emuva
Abaningi bethu okungenani kanye ezimpilweni zabo bazithola esimweni kunalokho ezingemnandi, lapho into atholwe asifanele. kungaba ezahlukene Izizathu zalokhu, futhi ngezansi sizoxoxa ngabo ukuhlela ukuba kube algorithm yesenzo esimweni ngasinye. Ngokuvamile uma uthenga imikhiqizo esezingeni eliphansi noma izinto esitolo noma esitolo esikhulu nge indawo yemali ukuze ngiphinde ngibabone akuyona inkinga enkulu: uthatha isheke, ukuthengwa onesici, uya esitolo futhi ukucacisa umdayisi phezu icala, lapho ebona, befuna noma ukushintshanisa for eliphezulu analog, noma ukubuyisela imali. Kodwa kuthiwani uma ithole izimpahla, kodwa akathathanga isheke noma silahlekile? Phela, iningi izimakethe zidayiswa, ngokuvamile ithengiswe ngaphandle amasheke. Ngakho-ke, ngaphambi abathengi ngezinye izikhathi kuvela umbuzo: kungenzeka ukubuyela izimpahla ngaphandle kokuthola? Impendulo ilula: kungenzeka uma ukukhombisa esiphezulu sokuphikelela, ukubekezela, kodwa ngesikhathi esifanayo ube nomusa nokunomsoco.
Umthetho kuyinto ohlangothini umthengi, kodwa silinganisela ngendlela enengqondo. Ukuze yogurt yaphangalala, abazithenge emakethe, wena cishe ukuze uthole imali emuva, kodwa esimweni imali esibi kakhulu - ngangokunokwenzeka. Ngakho, cabanga ngendaba lapho umthengi uye wangazinaka, ngathenga umkhiqizo onesici noma mbumbulu. Ngezinye isithende izicathulo aqathaka ngosuku lokuqala? Uthenge ingubo Italian nge kokuhlolisisa ayephenduka ithegi, okubonisa umsuka Chinese? Household lisebenze iyayeka ukusebenza lapho kuqala ivuliwe? Kuyini esingakwenzela kulezi zimo, futhi kungakhathaliseki ukuthi kungenzeka ukubuyela izimpahla ngaphandle kokuthola? It kuvela unga.
Okokuqala, khumbula umthetho evikela amalungelo abathengi - ngokucacile ubeka ilungelo lomthengi ukubuyela abampofu ukuthenga izinga. Yiqiniso, lokho kungubuwula ukucabanga ukuthi umthengisi uya emhlanganweni futhi ngajabula ukukunika imali yakho. Cishe, uyokwenza sengathi ukuthi uJehova waqale akubheka ngayo, bese uthenge eliphansi into mbumbulu noma cha yena. Kodwa ethenga into ebizayo - akusiwona imbiza yogurt. Ngo zasendlini kufanele kube isiqinisekiso, izingubo, izicathulo nezinto ezifanayo kungaba irisidi, ithegi we lokulondoloza, emaphaketheni ekhethekile sokukhiqiza. Uma kungekho irisidi, kodwa besithengela emphakathini abangane, bacele ukuba eze futhi uyaqinisekisa ukuthi lena esitolo lapho wenza yezitolo futhi, ngokukhethekile, wenza yokufuna.
Uma umdayisi siyaqhubeka abavumelani nombono, ngesibindi ukubiza umphathi-jikelele futhi akwethuse kokukhononda ukuba umphakathi ekhethekile evikela amalungelo abathengi (kodwa ngaphambi uxhumane nabo, phumani esitolo ebhaliwe ukwenqaba wabonisana ukushintshashintsha sempahla ethengwayo noma abuyisele emuva imali). Kufanele ubhalele uMqondisi isicelo lesitolo nokubuyiselwa kwezimali wachitha nguwe, okuyinto ucacise isizathu ukubuya uthenge futhi kunjalo umdayisi kuleli cala - ubhale dokhumenti isevisi intela zokubuyiselwa kwezimpahla. Kodwa uma umdayisi enqaba ukwenza isenzo esinjalo - ukuthi kungenzeka ukubuyela izimpahla ngaphandle kokuthola? Izinkantolo zivame ukunquma amacala anjalo esivuna amakhasimende abathintekayo, kodwa nakhu Nguwe okufanele unqume lokho - ukuthi bachitha imali engakanani-long enjalo baphotha like yicala.
Ake sithi umdayisi uvumile ukuthi yini leyo nto noma umkhiqizo uthenge, kodwa uveza ukuthi wena zimoshekile ukuthenga ukuphathwa kabi (umkhuba lalivamile esimweni zasendlini). Ngingaba ubuyele into ngaphandle kokuthola kulesi simo? Uphikelele Kulokho luhlolo, futhi ngezithukuthuku esitolo, bese uzama ukwethula wakhe nofakazi. Uma lokho kuhlolisisa kwembula ukuthi ngithenge into kwaba onesici, esitolo kumele abuyiswe lingakapheli isonto imali ikhokhwe noma kwakheke amanye esikhundleni izimpahla.
Manje cabanga ngendaba elandelayo: uthenge izingubo lomunye umuntfu, futhi kwakungeyona usayizi wakhe. Ngingaba bashintshisane into ngaphandle kokuthola? Yebo, uma ukugcina le arsenal kuyoba into yesikhathi usayizi olungile. Kungenjalo, ungakwazi singaphoqi imbuyiselo kokuthengwa ukubanjwa emuva esichithwa imali yakhe.
Futhi kunjalo zokugcina: uthenge into ngoba omunye umuntu, futhi wayemane akakuthandanga kuye. Kungenzeka yini ukuba ukuletha izimpahla ngaphandle kokuthola ngenxa yaleso sizathu kuphela? Yiqiniso, kodwa kufanele uqiniseke ukuthi ngemva ukuthengwa kungakapheli amaviki engaphezu kwemibili. Into akufanele igqoke noma kusetshenziswe okungenani kanye. Kungcono ubuyele umkhiqizo asemaphaketheni efanayo lapho yathengwa. Futhi-ke, into eyinhloko kulesi simo ukuze afakazele ukuthi kusukela esikhathini uthenge khona, nesikhathi esingamasonto amabili awukapheli.
Lapho isitifiketi sokufa? Ngingalutholaphi isitifiketi sokufa futhi. Ngingalutholaphi isitifiketi impinda sokufa
Indlela kudlule phezu isigaba ilayisensi B futhi snowmobile
Wokuqeqeshelwa impi. On emsebenzini Rothe
Lengetiwe Ubuchwepheshe: kuchaza, kucacisa, futhi isicelo izici izilinganiso. ubuchwepheshe lengetiwe e umkhakha
Skin. Uyini isikhumba futhi kungani sasidingeka?
I engavamile kakhulu imoto: uhlu, izithombe, umlando
"Umngane injongo ekhethekile" - nabalingisi icebo le filimu
Abalingiswa "Scooby-Doo": Umlandvomphilo ngiswa abasemqoka abazizwa kusukela ikhathuni ethandwa
Siyakuhalalisela intombazane lokuzalwa
Izimbangela emali e-Russia